#Somaliland: Guddoomiyaha Cusub Ee Wakiillada Oo Ka Hadlay Waxa Uga Qorshaysan Hoggaaminta gollaha - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
#Somaliland: Guddoomiyaha Cusub Ee Wakiillada Oo Ka Hadlay Waxa Uga Qorshaysan Hoggaaminta gollaha
Hargeysa(ANN)-Guddoomiyaha la doortay ee gollaha wakiillada Somaliland Cabdirisaaq Khaliif Axmed, oo maanta xilka la wareegay isaga iyo ku xigeenada shirgudduunka eel ala doortay, ayaa ka hadlay qaabka uu doonayo inuu gollaha u hoggaamiyo iyo tallaabooyinka u horreeya ee uu qaadayo.
Guddoomiye Cabdirisaaq, wuxuu sheegay in maanta wixii ka danbeeya xildhibaanadii u coddeeyay iyo kuwii ka coddeeyay ay dhammaantood yihiin hal golle oo laga sugayo isbedel, wuxuuna sheegay in gollaha wakiilladu noqon doono mid gurmad qaran ah.
Sidoo kale, wuxuu sheegay in uu doonayo in dadweynaha ku kala qaybsanay doorashadii gollaha wakiillada ay ka shaqaynayaan sidii loo midayn lahaa, wuxuu xusay in ay jiraan baahiyo badan oo ay dareemayaan dadkii soo doortay, wuxuuna Madaxweynaha iyo axsaabta qaranka kala shaqeeyaan sidii ay gollaha cusub kala shaqeeyaan sidii ay waajibkooda u gudan lahaayeen.
Gudoomiye Cabdirisaaq Khaliif, wuxuu uga gollihii hore uga mahadnaqay halka ay soo gaadhsiiyeen gollaha, isagoo dhankiisa balan qaaday in iyaguna ay gaadhsiin doonaan meel ka sii sar si hufan ugu adeegaan uguna gutaan waajibaadkooda qaran.
Halkan ka Dhegeyso Khudbada Guddoomiyaha Cusub.